Hafez Ghanem –Banky iraisam-pirenena: « Mila tetikasa laharam-pahamehana miady amin’ny fahantrana » | NewsMada
Hafez Ghanem –Banky iraisam-pirenena: « Mila tetikasa laharam-pahamehana miady amin’ny fahantrana »
Par Taratra sur 04/07/2020
Ao anatin’ny fanatontoloana sy fanalalahana tanteraka, ankehitriny, ny toekarena. Izay seha-pihariana mahazaka fifaninanana no afaka mampisondrotra ny harinkarena faobe ao aminy. Maivana anefa ny indostria malagasy ato anatiny sy eo amin’ny sehatra iraisam-pirenena. Tsy voahodina eto an-toerana, ohatra, ny vokatra maro ilain’ny mponina (PPN) matoa betsaka ny fanafarana azy ireny. Ny fanjakana manentana azy ireo, saingy tsy ampy ny hery manosika izany avy aminy, hatramin’ny Repobika faharoa ka hatramin’izao Repoblika fahefatra izao, raha tsy hilaza afa-tsy ny lalana sy ny angovo.
Miankina tanteraka amin’ny mpamatsy vola any ivelany ny fanaovan-dalana sy ny famokarana angovo eto amintsika. Miankina amin’ny fahitan’ny mpamatsy vola azy ihany koa raha toa ka mitondra fampandrosoana marina. Antony nametrahan’ny Banky iraisam-pirenena rafitra roa aty Afrika. Ho an’i Afrika atsinanana, tantanin’i Hafez Ghanem, saika ahitana ireo firenena marefo toa an’i Madagasikara.
Nilaza ity tompon’andraikitra ao amin’ny Banky iraisam-pirenena ity fa “mila tetikasa laharam-pahamehana miady amin’ny fahantrana aty Afrika atsinanana”. Madagasikara aloha mifanaraka amin’ny Banky afrikanina momba ny fampandrosoana (BAD) hampitombo ny herinaratra. Miandry ny asa fanaovan-dalana rehetra, ary indrindra ny asa fampandrosoana momba ny fambolena sy ny fiompiana, miaraka amin’izay indostria hanodina izany, tokony hiarahan’ny fanjakana sy ny tsy miankina.
Mety hiverina tany amin’ny taona 80 …
Mety hiverina amin’ny endriky indostria tany amin’ny taona 80 isika, raha ratsy safidy tsy laharaham-pahamehana ny fampiasam-bola ataon’ny fanjakana. Tsiahivina fa nisy ny lalàna nifehy ny indostria tamin’izany fotoana izany ka ny fanjakana ihany no tompon’ny renivola miasa ary ny fanjakana ihany koa no tompon-kevitra amin’ny hetra.
Tsy nisy nampisondrotra ny toekarem-pirenena ireo fa nitondra fatiantoka noho ny fitantanana tsy manjary (Nationalisation-Fitantanana gaboraraka, Taratra, 30 jona 2020). Manamarina izany ny fanadihadiana nataon’ny Sendikan’ny indostria eto Madagasikara (SIM).